Ninkaan ma garanaysaa [Video] ? | Somaliska
Add Video / Af-Soomaali
Ninka halkaan ku sawiran waa nin naxariis daran oo nacas ah. Waa ninka Johny oo 38 sano jir ah oo isaga oo cabsan ku dhacay wadada tareenka ka furtay alaabtiisa ka dibna uga tagay halkaasi si tareenka uu u jiiro.
Ninka tareenka ku dhacay ayaa waxaa jiiray tareenka balse waa badbaaday in kastoo ay soo gaareen dhaawacyo aad u culus. Ninkaan meesha ku sawiran waxaa raadinaya booliska, waxa uu horay u furtay dad kale oo cabsan. Haddii aad garanayso ninkaan ama aad aragtay fadlan ogeysii booliska. Waa nin doqon ah, waa nin tuug ah, waa nin aan aqoon qiimaha ay leedahay nafta bani’aadamka.
Idiot. Ninkan hadda warka ka daawanaya weliba waa invandrare. Ser ut som araber.. ninka cidi aragta fadlan u sheega Polis ka. kan kale maaha mid la qariyo..
Asc, marka hore in lasaacido dowladda waa sheey muhiim ah maxaayeelay axsaan ayee inoo sameeyeen xukuumadda Sweden laakin su’aasha axeey tahay nidaamkooda ayaa ah mid dhib badan ama qofka u keeni kara iskadaba wareejis marka waa wax dhibkeeda leh, midda kale kuwaan cabsan ama ku caba maan dooriyaha video gan fariin fiican ayuu u yahay waa hadii ay ku tusaalo qaadanayaan.